Yedu Services - Yunis International Trading Co, Ltd.
Ona zvikamu zvese
Coral Mafuta Mat
Rubber Dzoka Doormat
Yiwu Artificial Maruva Soko
YIWU MABHUKU NEZVINHU ZVINYANYA ZVEMAKARA
YIWU FUTIAN MUKADZI DZIMAI
YIWU ANOGONESA ZVINOKOSHA ZVENYAYA
YIWU HUANGYUAN MAKOBATA MENYAYA
YIWU JEWELRY VANYANYA MUKADZI
YIWU SCARF Uye SHAWLS MUKADZI MUTSVIKI
YIWU STATIONERY MARKET ZVINYANYA
YIWU TOYS MAKONANI ZVESE
Yiwu YUNIS Imp & EXP CO., LTD inyanzvi yeku kutumira kunze kwenyika inoenda kuChina yakakura yezvokutengeserana uye yekutengesa nzvimbo - Yiwu. Isu tiri kuita Yiwu mumiririri, Yiwu kutumira mumiriri, Yiwu kutenga mumiriri. Uye kuita mutsara wekutumirwa basa. Vakadaro isu hotera kubhuka, airport pinking-up, chigadzirwa kuchenesa, kutenga, musika kutungamira, shanduro, commodity Kuongorora, kuresha, China tsika kuzivisa, mudziyo kutakura, kutumira kwenyika (pamwe negungwa kana nemhepo), kugadzirira kwetsika clearance magwaro uye nezvimwe. Sezvo Yiwu yako ichitsikisa & kutumira kunze, zvinoreva kuti une hofisi muUyuwu / China, saka inokuchengetedza iwe nguva uye mutengo. Masevhisi edu haangogumiri muguta re Yiwu, isu tinokwanisa kukubatsira kuti uite bhizinesi mune chero dzimwe nzvimbo dzeChina.Tinoda kuve wako akavimbika, wehupfumi, akavimbika uye wenguva refu muChina. Isu tinopihwa yemahara mushanduri lady yekutungamira soko. Yiwu YUNIS Imp & EXP Co, LTD ndiyo yako yakanakira sarudzo!
Maitiro edu ehurongwa:
Usati wauya Yiwu
1. Kukupa zano yakanaka nguva yenguva yako yebhizimusi rwendo kuenda kuChina.Source vatengesi uye kuronga misangano iwe usati wauya kuChina.
2. Chinyorwa China Inover tsamba (Bhizimusi rekukoka kana kutumira kwepamutemo. Tinogona zvakare kukubatsira nezvenyaya dzeVisa)
3. Bhuka hotera iwe neyakanyanya kuderedzwa.
4. Airport pikicha kubva Yiwu, Shanghai, Hangzhou
Paunosvika Yiwu, tanga kutenga kwako
1. Inokutungamira iwe kushanyira iyo chaiyo zvigadzirwa misika uye shanyira zvese zvitoro chimwe nechimwe, kana kushanyira mafekitori akanaka kana neccesory
2. Dudziro uye kutaurirana kwe Mitengo pakati pako nemutengesi
3. Cherechedza pasi iyo yekuraira, nyora zvese zvese zvakadai se: chinyorwa Pasina tsananguro, huwandu, saizi, ruvara, mapepa emakesi, cube metres, panguva imwe chete tora mafoto ezvese zvinhu zvawakaraira.
4. Gadzira fomu yekuraira iwe kuti utarise mutengo, huwandu hwakazara, yakazara Cube metres.
Mushure meMupedzisa Yiwu kutenga
1. Isa mirairo iyo iri nemifananidzo yezvigadzirwa kune vese vatengesi
2. Tevedzai yega yega yekuita kuti chokwadi chekuti zvigadzirwa zviri kuzadzikiswa Zvinoenderana nenguva yedu inotarisirwa. Bika maitiro kwauri nhanho nhanho
3. Yemahara yekuchengetera chitoro, tinounganidza zvinhu kuimba yedu yekuchengetera uye tichitarisa zvinhu kuti zvive nechokwadi chekuti mirairo inoenderana nezvaunoda.
4. Govera kubhadhara kwezvinhu kune vatengesi vako
5. Maererano nechikumbiro chemutengi, nzvimbo yekutumira bhuku uye kuronga kutumira.
6. Gadzirira zvinyorwa zvekutengesa zvine chekuita nazvo. Kuzivisa China tsika
7. Gadzira nyika dzekunze zvinyorwa
8. Tumira rugwaro rwese pamwe chete neB / L neku kuburitsa pachena, kuti iwe uite iyoCustoms clearance.
Paunenge usiriin China. Tinogona kuva akavimbika bhizinesi rako mubatsiri
1.Kana iwe uine chero zvigadzirwa zvinoda kutsvagisa muChina, Tichaedza kukupa mutengo munguva pfupi.
2. Tumira iyo yezvazvino, yakakurumbira uye inoenderana zvigadzirwa ruzivo kwauri.
3.Inspect mairaira iwe. Kana iwe wakaraira kubva kune mamwe mafekitori, Tinogona kuenda kune fekitori uye kuongorora mhando, huwandu, kurongedza zvinyorwa uye nevamwe vese. Uyezve tinokutumira iwe kuongororesa mushumo kwauri kuti uve nechokwadi chekuti kodhi inoenderana nezvaunoda.
4. uye sanganisai zvinhu zvevatengesi zvakasiyana kubva kunzvimbo dzakasiyana muchigaro chedu chemahara.
1 、 YUNIS ine fekitori yakakura network uye edu emafekitori mashanu. Unogona kutenga zvigadzirwa pamutengo wefekitori.
2 、 YUNIS inobvuma diki / yekuyera mirairo iyo mafekitori anotendera.
3 、 YUNIS QC mukadzi anoteedzera neese maodha akaiswa kudzora mhando.
4 、 YUNIS inogamuchira maitiro ekugadzira uye kugadzira.ODM, OEM chirongwa inogamuchirwa kwazvo.
5 、 YUNIS inogona kupa vatengi vedu kukwikwidza mutengo wekutumira sezvo isu tine akavimbika ekumberi wekufambidzana naye.
6 、 YUNIS ine imba yedu yekuchengetera uye inobatanidza zvinhu zvakasiyana zvevatengesi kubva kunzvimbo dzakasiyana mune yedu yekuchengetera zvemahara.